पन्ध्र मुरी जति धान फल्ने खेत थियो । झण्डै यतिनै जति पाखा बाली फल्ने बारी थियो । परिवारको अरु आयश्रोत केही थिएन । बस् …. यतिले नै हामी परिवारिक गुजारा चलाइरहेका हुन्थ्यौं । पुग नपुग अरु सितको सरसापटमा हाम्रो परिवार धानिदै थियो ।
पहाडबाट झरेको ६ महिना वित्दा नवित्दै मलाई त्यहींको एकजना भारतीय शिक्षकले पढाउने गरेको ‘घरेलु पाठशाला’ मा भर्ना गरिएको थियो । डेरा नजिकै रहेको, त्यही पढ्ने गरेको मेरै उमेरका वृषेशचन्द्रलालको सहयोगमा म त्यहाँको ‘निमगाछी’ मा पढ्न जान थालें । अग्लो, कालो अनुहार, व्यवहारमा कठोर देखिने ‘काइस्त मास्टर’ ले मलाई पढाएका थिए । म प्रत्येक दिन ओछ्याउने बोरा, झोलामा काठको पाटी, एउटा–दुईटा किताव र कापी बोकेर डराउँदै डराउँदै ती माष्टर सामु पुग्थे । सम्पूर्ण रुपमा हिन्दी भाषामा पढाउने ती माष्टरको कुरा मैले धेरै समयसम्म बुझ्दै बुझिन । ‘मूँहजमानी’ (किताव नहेरी कण्ठ सुनाउनु पर्ने पाठ) छ कि छैन भनेर उनले सोद्धा मेरो एक किसिमले सातो नै जान्थ्यो । म पहाडे केटोले, भाषा नै नबुझ्ने विद्यार्थीले कसरी हिन्दीमा लेखिएको कितावको पाठ ‘मूँह जमानी’ सुनाउनु ! पाठ सुनाउन माष्टरका अगाडि उभिनु मलाई कालका अगाडि उभिए जस्तो हुन्थ्यो । त्यसवेलाका पाठका अरु कुनैपनि अंश म अहिले सम्झन्न तर त्यसवेलाको एउटा कुराको भने संझना अहिले पनि ताजै छ । पढाई शुरु हुने बेलामा ती माष्टरले हिन्दीमा हामी सवैलाई उभ्याएर राष्ट्रिय गीत गाउन लगाउँथे – “जनगण मन हे नायक भारत भाग्य विधाता ……” र पाठको बीच बीचमा “हमारा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु …..” भन्ने लेखिएका अंश उनले हामीलाई सुनाउँथे । यी कुराको, त्यसवेला मैले खासै केही अर्थ बुझ्न सकेको थिइन । बेलाबेलामा जनकपुर भारतकै अंग पो हो कि जस्तो पनि लाग्थ्यो । ती माष्टरले हामीलाई प्रत्येक दिन क्लास छुट्ने बेलामा ‘पाहाडा’ घोकाउँथे । शुरुका केही दिन मलाई अप्ठेरो लागेपनि लयात्मक लाग्ने भएका कारण पछि पछि मन पर्दै गयो । एक किसिमले यातनादायी पढाईका ती दिन मैले विताएँ ।